DTS | GAZETY_ADALADALA
DTS MOOV manenjika Blaogera
Ity lahatsoratra faran’izay fohy ity dia fanehoana firaisankina amin’ny namana iray mpitoraka bilaogy (blaogera) rohizan’ny DTS MOOV amin’ny raharaham-pitsarana.
Raha nahatsiaro isika rehetra mpampiasa ny tolotr’io orinasa iray io dia RATSY BE ny tolotra tany amin’ny herinandro faharoa tamin’ny volana Martsa tany. Naharitra fotoana ela tokoa izany. Isan’izay nikamenona sy tsy nitsahatra niantso ny mpisahana ny mpanjifa tao amin’io orinasa io ny teto amin’ity bilaogy vakianao ity. Tamin’izany dia nangatahana tamiko daholo ny hoe iza avy ny sites tsidihanao ka tsy misokatra. Rehefa nomena azy ny hoe Globalvoicesonline.org, advocacy.globalvoicesonline.org, mg.globalvoicesonline.org, gazetyavylavitra.wordpress.com, ary hatramin’ny ny Yahoo aza, dia nihevitra ny tena fa hisy fandraisana fepetra manoloana an’izay ka hiverina amin’ny zavatra fanao andavan’andro ny tena. 48 Ora no fotoana nomena. Dia hoy ry zareo:
Piho ny modem (nefa zavatra efa rano fisotroko isanandro io rehefa misy tsy mazavazava ny fifandraisana), ny tanjona dia mba hahafahana manome IP vaovao anao.
Nefa indrisy, ny teo ihany no teo.
Tsy herinandro fotsiny io zavatra io no niseho fa mahery lavitra an’izany aza. Rehefa miantso ny 22 572 76 ianao dia izao no valinteny:
Efa eo ampijerena ny olana izahay
Zavatra nahagaga sy nahazendana ny maro ny tsy fisian’ilay fialantsiny sy fanazavana ny antony raha tsy efa andro maro taty aorian’ny nisian’ilay trangan-javatra nampimenomenona ny mpanjifa. Tsy vitan’ny nampimenomenona fotsiny fa niteraka fatiantoka iray lavaka ho an’ny sasany.
Isan’ireo izay nahateny tamin’ny MOOV aho tamin’ireny fotoan’andro ireny nanao hoe:
Rehefa tonga ny datin’andro fisintonanareo ny vola any amin’ny kaonty (banky) dia mipingapinga ery ianareo manao izany, ary tsy tara mihitsy. Fa raha ny fahafaham-po amin’ny tolotra, dia tsy misy. Fa sady tsy hajaina ny mpanjifa no tsy misy fanonerana ataonareo rehefa misy ny desagrement tahaka izao
Santionany amin’ny resaka nifanaovako fotsiny io notateriko io. Ary santionany koa amin’ny tsy hafalian’ireo mpanjifa maro any ambadika any tsy manana fahafahana hiteny toy ny antsika sy ianao mamaky io.
Saingy santionany iray hafa tsy zakan’ny DTS/MOOV ny teny nataon’ny namana iray blaogera mikasika izay olana izay, ka dia eny amin’ny fitsarana no niafarany. Izy no nilaza teny am-bovonana ny zavatra nosaintsainin’ny maro any ampony mangiana any. Nanao sorona ny tenany ho fanatsarana ny fomba fitondra antsika mpanjifa. Tokony ho fantatry ny DTS/MOOV fa ao anatin’ireny hatezeran’ny mpanjifa ireny dia misy fitiavana ihany koa: fitiavana hanatsara zavatra, na dia tamin’ny fomba mahzery vaika nentin’ny fo aza no nanaovana azy, fitia tsy te-hanan-dratsy hoy ny Malagasy. Sa tsy Malagasy tokoa moa no mitantana ny DST/MOOV? Azafady raha diso fiantefa ary ny hafatro e!
Androany no niakatra voalohany teo anatrehan’ny fitsarana ny raharaha ary nahemotra ho amin’ny 27 May ny fandinihana azy.
Tahaka izay tsy fahazakan’ny DTS/MOOV azy izay, no tokony koa hahatsapany ny fahasorenana sy ny tsy fahazakan’ny mpanjifa ny zava-nihatra tamin’izy ireo nandritra ireny fotoana ireny. Ekena fa noho ny fo rano mafana dia mety ho nisy teny tsy ambina tao anatin’ny lahatsoratra navoakany. Nafàna noho ny faharetan’ny tsy fetezana, nafana noho ny tsy fahitana olona manome valinteny mahafa-po amin’ny fangatahana fanazavana natao, nafana noho ny …, noho ny …Saingy mihevitra ve ny DTS/MOOV fa hanatsara endrika azy ny fitondrana ny raharaha eny amin ny fitsarana? Tsia angamba raha ny hevitro, satria vao mainka aza ho karazana Publicité négative ho azy izany. Mihetsika daholo manaraka akaiky ity tranga ity ankehitriny ny blaogera mafana fo rehetra eto amin’ny tanàna. Efa eo ambanin’ny Loupe-n’ireo fikambanana fiarovana ihany koa ny fizotry ny raharaha. Tsy eto amin’ny sehatry ny firenena fotsiny intsony no ilalaovana ankehitriny, fa mety hitatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka ho fantatr’izao tontolo izao ny tantara. Koa hampaninona ny MOOV tokoa moa izany? Tsy mampaninona azy ka! Vao mainka aza ho dokambarotra mba hampiasàn’ny any ampita ny tolotra MOOV koa aza angamba. Enga anie!
Tsy vitsy ny naneho hevitra mikasika an’io tolotra FARAN’IZAY RATSY TAMIN’NY VOLANA MARTSA sy ny taoriany io. Koa ho anao izay niharan’izay, SAHIA MIJORO, MITENENA, ARY LAZAO NY HASOSORANAO, fandrao tara loatra ka rehefa tafapetraka ho lalàna ny hoe azo atao ny manao tsinontsinona ny mpanjifa, vao ho taitra ianao.
Isaky ny amin’ny 10 ora alina sy amin’ny enina maraina, indraindray dia manao ilay hoe « test de bande passante » aho. Vohikala roa samihafa no ampiasaiko amin’izany, ka ny iray dia ilay speednet atolotry ny MOOV, fa ny iray kosa dia ilay nampiasain’ilay namana notoriany. Fa tsy mbola nahita hoe tafakatra ambonin’ny 0.7XX mihitsy. Dia aiza izany ilay 1M lazaina anaty fifanarahana?
Manantena koa izahay fa raha misy fiantsoana an’ireo rehetra nizaka ny mafy tamin’ireny fotoana ireny (toy izay mbola nitranga indray tamin’ny 1 May 2011 teo), dia mba ho isan’ny hanatevin-daharana isika rehetra, na fikambanana ianao , na olon-tsotra.
Ary mba aiza tokoa ny Fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa amin’ny tahaka izao? Sa voafetra ho amin’ny resaka fitaterana sy sakafo ihany? Sao mba tokony ho isan’izay tairina amin’ity resaka ity ry zalahy ireny?
ISIKA REHETRA HO AO AN-DAMOSIN’ILAY NAMANA NOTORIANA
Saika hadinoko, mba nisy fangatahana fanazavana izay nalefako tao amin’ny vohikalan’ny MOOV momba ny tolotra Fahitalavitra anaty aterineto (télé en ligne). Efa elaela ihany, saingy asa raha misy embouteillage any anaty fil any ka tsy voarainy, na nisy nangalatra teny an-dalana ny hafatro, na koa tsy noraharahiana satria bandy be kamenona. Tsy olana fa tsy dia voalohan-daharana koa ilay izy fa fitia te-hahalala fotsiny. Azonareo MOOV tsy asiana tohiny intsony iny fa aza atao mampiasa saina. Tsy hitory anareo noho izay resaka tsy famaliana ny hafatro aho akory, na ny tsy firaharahiana ny mpanjifa. Hatreto aloha!
Filed under: ady sy fifandirana, aterineto, fiaraha-monina, haino amanjery, haitao, tapatapany, telecommunication, tontolon'ny asa | Tagged: bilaogy, blaogera, DTS, Moov |	Leave a comment »